Jurassic World oghere emewo ka azụ ụfọdụ nke ọkacha mmasị gị dinosaurs iji tinye ụfọdụ na-akpali akpali ahụmahụ ná ndụ gị. Nke a Jurassic World oghere na-kere Microgaming na na-ihu ọma sitere n'ike mmụọ nsọ si anyị hụrụ anyị n'anya nkiri Jurassic Park. Ghara ikwu, ọ na-enye ụfọdụ na-akpali akpali bonus atụmatụ nke ka i nweta dị ka ihe dị ka ị chọrọ.
Duru gị dinosaurs na Jurassic World oghere
Nke a Jurassic World oghere atụmatụ ise-esi anwụde tinyere ahịrị atọ na 243 ụzọ iji merie. Esi anwụde na-mara mma e mere na ụfọdụ futuristic style nke a mere metallics. The backdrop a kọwara site a park-dị ka Ọdịdị, ezi complementing na-esi anwụde.
Nke a Jurassic World oghere ga-egwu ụfọdụ mkpachị na music si nkiri n'ihi ya na-eme ka ya ọtụtụ ihe na-akpali.
The elu kpọrọ ihe nnọchianya ndị e kwuru site na-agụ akụkọ ndị nkiri onwe ya i.e. Owen, Simon, Clare, na Nick. The ala kpọrọ akara, n'akụkụ aka nke ọzọ, ndị a collection of iche iche iche iche nke dinosaurs na dị iche iche na agba.
Egwuregwu si logo bụ anụ akara ebe a anwụnta na amba e mere dị ka ikposa akara.
Bonuses n'okpuru aha gị
E nwere dị iche bonus atụmatụ nyere na nke a Jurassic World oghere. Si nke, first one is Wild scatters. Ọ nwere ike triggered site ọdịda abụọ ikposa akara n'otu atụ ogho. Ọ ga-agbanwezi ma nke ha n'ime a ọhịa, n'ihi ya awarding ị ụfọdụ mmezi wilds.
Indominus Rex bụ esote atụmatụ a oghere. A ibu e kere eke ga-egosi oge na ụfọdụ etiti oge mgbe gị isi egwuregwu. Ọ ga-gi ba uba Enwee Mmeri ruo 1000x.
Ọ bụrụ na ị ga-adaa atọ ma ọ bụ karịa ikposa akara mgbe ahụ, ọ ga-ịkpalite a free atụ ogho feature maka ị. First free spin feature is the Gyrosphere Valley which will award you 10 free spins tinyere a multiplier amụba na bụla na-abụghị na-emeri atụ ogho. Ọ ga chupu mgbe ị ga-enweta a mmeri. The abụọ mma bụ Creation ụlọ nyocha. Ọ ga-award ị na 10 free spins na ụfọdụ na-emeri ihe nnọchianya. Ndị a na akara ga-n'anya n'ime oge ụfọdụ mere na i nwere ike ịmepụta ụfọdụ ọzọ Enwee Mmeri. The ikpeazụ mma bụ Raptor Den nke na-enye gị 10 free spins na ikposa ihe nnọchianya nke na-eme ka anụ ọhịa.
Nke a Jurassic ụwa oghere jupụtara omume tinyere na-akpali akpali ikuku nke-enye gị ka nwere ụfọdụ oké oge fun. Egwu na-akpọ ya n'ihi na ogologo okwu, enye gị ohere ịhọrọ gị free atụ ogho bonuses. Na-gị ebe na-agwụ ike? Gịnị banyere akpọ ụfọdụ dinosaurs na mgbede a?
Free oghere Games na Best Casino Sites Near Ị £ 5 Ugbu a!